admin – Page9– @mmunited
Steem Velocity Hardfork 20:explained in myanmar language part-3
Hardfork 20 Steem Velocity အကြောင်းရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပိုစ့်က အပိုင်း ၃ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း ၁ နဲ့ ၂ ကို အောက်ကလင့်ခ်တွေမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ part-2 part-1 Ref Link: https://steemit.com/steem/@steemitblog/steem-velocity-hardfork-hardfork-20 တတိယပိုင်းမှာ ပါဝင်မှာကတော့ 20 Second Comment Limit Fix for Double Voting Exploits Decrease Delegation Cooldown Period Increase Account Voting Power Precision Minimum Account Usability Upvote Lockout Period Steem Blockchain Dollar (SBD) Changes Update SBD Print Rate …
Steem Velocity Hardfork 20:explained in myanmar language part-2
Hardfork 20 Steem Velocity အကြောင်းရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပိုစ့်က ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမပိုင်းကို အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ https://steemit.com/steempress/@mmunited/steemvelocityhardfork20explainedinmyanmarlanguagepart-1-3tfvih5v6u ဒီပိုစ့်မှာ ပါဝင်မည့် အကြောင်းအရာတွေကတော့ Dust Vote Threshold Changes Removal of the Minimum SP Power Down Restirction Curation Updates 30-minute Curation Window Self-Voting Rewards Expiration of Internal Market Orders Changes for Witnesses Update to Witness Price Feed Format Flexible Witness Parameters Limit on Maximum Block Size …
Steem Velocity Hardfork 20:explained in myanmar language part-1
ဒီနေ့ ပိုစ့်မှာကတော့ Hardfork 20 Steem Velocity အကြောင်းရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hardfork 20 ကို စက်တက်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့မှ စတင်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ အတိုင်းဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကတော့ witnesses တွေရဲ့ မဲပေးမှုပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့မူရင်းပိုစ့်ကို သုံးပိုင်းလောက်ခွဲပြီး ဘာသာပြန်ဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာ ပါဝင်မှာကတော့ Resource Credits Updates to Account Creation Discounted Accunt Creation Discount Account Creation Tokens Stake-Based Discount Account Creation Market Burn Account Creation Fee Deprecate Account Creation with Delegation Operation …
What isabounty exactly? Expalined in myanmar language
For english user this comment will explain about bounty. This comment is made by @steem-bounty https://steemit.com/contest/@steem-bounty/re-new-sbi-contest-3-shares-on-offer-steem-bounty-for-all-entrants-20180809t015819 Bounty ဆိုတာဘာလဲ။ Bounty ဆိုတာကတော့ ပိုစ့်တစ်ခုကို မှတ်ချက်ပေးကြတဲ့သူတွေ ကိုခွဲဝေပေးတဲ့ ငွေကြေးဖြစ်ပါတယ်။ သူတိုsteem blockchain ကနေရတဲ့ SBD/Steem တွေကို မှတ်ချက်ပေးတဲ့သူတွေကို တိုက်ရိုက်ခွဲဝေပေးတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Steempower နဲ့ မပတ်သက်ပါဘူး။ Bounty တစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ SBD/Steem တစ်ခုခုကို (ကိုယ်လွှဲချင်တဲ့ပမာဏ) @steem-bounty ကိုလွှဲပေးပါ။ memo မှာတော့ ကိုယ် ဆုပေးချင်တဲ့ ပိုစ့်ရဲ့လင့်ခ်ကို ထည့်ပေးပါ။ ဒါကတော့ author ကလုပ်ရမည့်အပိုင်းပါ။ Bounty ကို …
two proposals I liked for steem
I consider to write this post in myanmar language. If you areauser who use english you can read this in the following posts. https://steemit.com/utopian-io/@jga/steem-proposal-to-reduce-voting-rings-and-self-voting https://steemit.com/utopian-io/@smcaterpillar/steem-improvement-proposal-revoting-power-to-counter-upvote-circles-and-bid-bot-abuse This following is in myanmar language. Steem on! အခု steemit မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာ(ပြဿနာလို့ပဲဆိုကြပါစို့) တွေကတော့ Selfvote, Bid Bots တွေကိုသုံးတာနဲ့ Circular voting pattern ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ SP များတဲ့သူတွေက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် upvote ပေးပြီး ပိုက်ဆံယူနေကြတယ်။ အချို့တွေကျတော့လဲ …
@isteemd has started three months ago. After they worked tirelessly for three months https://isteemd.com is emerging. Spread Awareness about Steemit as much as you can. Through our collective efforts, we would increase the awareness of steemit not only asablogging platform but also as an investment platform. I like this words too much. …
Steempress ကို wordpress site မှာ အသုံးပြုဖို့ဆိုရင် ပထမဆုံး Steempress ကို install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအောက်ကလင့်ခ်ကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။ SteemPress ပြီးတာနဲ့ plug-in ကိုဒေါင်းလုဒ် ဆွဲလိုက်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ Plugins>Add New ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Add Plugins>Upload Pluginပြီးတာနဲ့ Activate ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒီအဆင့်အထိက လွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Activate လုပ်ပြီးတဲ့ အဆင့်ကနေ စပြီး ပုံတွေနဲ့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကပုံတွေနဲ့ gif တွေကို Ref Link: https://steemit.com/utopian-io/@apkmopo.com/tutorials-steempress-to-write-steemit-post-on-wordpress ကနေယူသုံးထားပါတယ်။ ပထမဆုံး Setting ကိုသွားပါ။ အဲ့ဒိမှာ Steempress ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Steempress ကိုနှိပ်လိုက်ပါက ပုံမှာပြထားသလိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Steemit username နဲ့ private posting …
3 discord channels to join today
ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်တာက Fundition ရဲ့ discord server ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ အခုမှစလုပ်တဲ့ server ဖြစ်တဲ့အတွက် လူသိပ်မများသေးပါဘူး။ အဲ့ဒိလို မများသေးတဲ့အတွက်လဲ များလာအောင်လို့ လူတွေကို ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ လူများများလာအောင် အခွင့်အရေးလဲ ပေးထားပါတယ်။ ဆုကြေးတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆု − 10 SBDဒုတိယဆုနှင့် တတိယဆု5SBD စီစတုတ္ထနှင့်ပဉ္စမဆု3SBD စီ ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ https://discord.gg/MwxY3dn အပေါ်ကလင့်ခ်ကို နှိပ်ပြီး join နိုင်ပါတယ်။ ဒီ server မှာကတော့ join ထားရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး။ စာများများရိုက်ဖို့လဲလိုပါတယ်။ နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ server ကတော့ esteem ရဲ့ server ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ဘာမှမပေးပါဘူး။ …
Aceh on steemit
အာချေးပြည်နယ် အကြောင်း အာချေးပြည်နယ်က ဆူမာတြား ကျွန်းရဲ့ မြောက်ဘက် အဆုံးမှာတည်ရှိပါတယ်။ မြို့တောက်နာမည်ကတော့ Banda Aceh ဖြစ်ပါတယ်။ မုတ္တမကွေ့နဲ့ ကပ်လျှက်တည်ရှိသလို အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ Nicobar ကျွန်းနဲ့လည်း ကြားမှာ မုတ္တမပင်လယ်ပဲ ခြားပါတယ်။ မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ပါတယ်။ Indonesia Aceh in green မွတ်စလင်တွေ ဝင်ရောက်မလာခင်တုန်းကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ Dharmic ယဉ်ကျေးမှုတွေ ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ လူဦးရေကတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရ ငါးသန်းကျော်ပဲ ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၁၀ ပုံတစ်ပုံပဲရှိပါတယ်။ Aceh Flag အခုပြောချင်တာကတော့ အဲ့ဒိအကြောင်းအရာ မဟုတ်ပါဘူး။ good-karma ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ esteem app သုံးတဲ့သူတွေ ထဲမှာ aceh က အများဆုံးပါပဲတဲ့။ Category …
Discord to join today
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ join ဖို့လိုအပ်မည့် discord server နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ esteem ရဲ့ discord ပါ။ အောက်ကလင့်ခ်ကနေ join နိုင်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်မှာ esteem ကနေ upvote မပေးတော့ပေမဲ့ ပြန်ပြီး upvote ပေးလာအောင် လုပ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ https://discord.gg/N9X2FHC အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့ esteem-university အထိလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ fundition ရဲ့ discord server ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ active အဖြစ်ဆုံးသူတွေကို ဆုကြေးပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဝင်ရောက် ဖို့ အကြံပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပြီး join နိုင်ပါတယ်။ https://discord.gg/MwxY3dn Fundition discord မှာ giveaway ပိုစ့်ကို တင်ထားပေးပါတယ်။